श्रीमतिको रुपको श्रीमान् नै बने शत्रु, यसरी बनाए कु-रुप सनमाया रुँदै आइन् मिडियामा (भिडियो हे’र्नुहोस्)
Homeसमाचारश्रीमतिको रुपको श्रीमान् नै बने शत्रु, यसरी बनाए कु-रुप सनमाया रुँदै आइन् मिडियामा (भिडियो हे’र्नुहोस्)
March 22, 2021 admin समाचार 5652
श्रीमान् श्रीमति भनेको एकै रथका दुई पां’ग्रा भनिन्छ । अझ जोडि त भगवानले नै बना’उँछन् भन्ने गरिन्छ । सुखदुखमा साथ होला भनेर मा’निस बिहे गर्छन् । तर आफ्नै श्रीमान् आफ्नो रुपको बै’री भए कसको के लाग्छ ?
यस्तै घ’टना सनमाया गुरुङलाई भएको छ । उनलाई उनकै पतिले मट्टी तेल हालेर कु ‘रु प बनाएका छन् । यतिबेला जो को’हीले पनि यदि सनामायालाई भेट्छ उ सन’मायालाई देखेर त र्स न्छ ।
सनमायाको ज’ ले को घा उले नै देख्ने मान्छेलाई पो ले को भान हुन शुरु गर्छ । उनको श’रीर पुरै जलेको छ । सनमायाले आफुलाई परेको दुःखको कुरा सुनाउनलाई मिडियाको सा’हारा लिएकी छन् ।
घरमा सामान्य घर झ ‘ग डा जो कोहिकोमा पनि हुन्छ । तर यस्तो घर झ ‘ग डा जहाँ बाचियोस् तर म रे सरह हुनु भन्दा दु’खदायि अरु के नै हुन सक्थ्यो होला र? आफू दिनभरि काम गरेर आ’उने तर पति भने दिनरातनै र क्सि’ पि ए र आउने आफुलाई कु ट पि ट गर्ने र आफ्नो आफन्त पनि कोहि नभ’एको बताउछिन् सनमाया ।
आफू ज्यामी काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्ने ब’ताउछिन् उनी । तर एक रात तिनै पतिले शरिरभरि मट्टि तेल खन्या’एर आफ्नोे यस्तो दुर्ग’ति बना_एको बताउछिन् उनी । आफुसग उपचारको खर्च पनि नभएको र बिहान बेलुकाको छा’कनै टार्न गा ह्रो भइरहेको बेला उपचार त सपना मात्रै भएको बता’उँछिन् उनी । – इताजा खबरबाट
April 7, 2021 admin समाचार 6393
October 24, 2020 admin समाचार 12182
November 29, 2020 admin समाचार 9435